Bandhigga Buugaagta ee Muqdisho oo sanadkii 3aad furmay (Sawirro) · Jowhar.com Somali News Leader
Bandhigga Buugaagta ee Muqdisho oo sanadkii 3aad furmay (Sawirro)
by A M | Wednesday, Sep 13, 2017 | 3315 views
September 13 (Jowhar)— Bandhigga 3aad ee Carwada buugaagta Muqdisho ayaa maanta furmay, iyadoo kumanaan ruux oo isugu jira marti sharaf iyo qorayaal ay ka qeyb galayaan bandhiggan.
Bandhiggan ayaa ka duwan bandhigii labadii sano ee la soo dhaafay lagu qabtay magaalada Muqdisho, marka loo eego qaban qaabada iyo sida loo diyaariyay.
Qaban qaabiyaha Carwada Buugaagta Muqdisho Maxamed Diini ayaa sheegay in bandhigan uu sanadkan ka dhigan yahay dhisida Soomaaliyada cusub, oo ay tiir u yihiin qoraal, dhigaal, akhris, cilmi iyo aqoon.
Waxaa uu sheegay in akhrinta iyo qoraalka ay yihiin hooyada iyo aabaha, isla markaana inta uu socdo bandhigan lagu soo bandhigo doodo cilmiyeedyo, cilmi baaris iyo aqoon kala duwan.
Bandhigan ayaa waxaa sanadkan ka qeyb galaya 1,211 ruux, halka sanadkii hore ay ka qeyb galeen 1,050 ruux, waxaana sanadkan lagu soo bandhigayaa buugaag ku qoran afaf kala duwan.
Waxaa bandhigan lagu marti qaaday illaa shan qoraa oo Ajnabi ah oo saddex ka mid ah ay ka socoto dalka Kenya, labada kale ay ka socdaan dalalka Rwanda iyo UK.
Buugaag ay ku qoran yihiin afaf kala duwan ayaa lagu soo bandhigay carwada buugaagta, sida afka booran, suugaan, buugaag ay ku qoran yihiin afka English-ka, iyo kuwa kale oo dhaqanka, diinta iyo qoyska iyo guurka ka hadlaya.
Marti sharafta lagu casuumay bandhiggan ayaa ka mid ah siyaasiyiin horay xilal u soo qabtay, kuwaasoo buugaag ay qoreen ku soo bandhigaya carwada.
Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Danjire Micheal Keating ayaa ka mid ah martidii lagu casuumay bandhiggan buugaagta ah.